Mankalaza An’i Nelson Mandela Ireo Nizeriana, “Loharanom-Paniriana Iray Ho An’ny Olona” Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2013 4:51 GMT
Maty ny 5 Desambra 2013 teo amin'ny faha-95 taonany i Nelson Mandela, filoham-pirenena mainty hoditra voalohany tao Afrika Atsimo izay nitàna toerana goavana teo amin'ny famotehana ny fanavakavaham-bolonkoditra tao amin'io firenena io. Nandany 27 taona tany an-tranomaizina noho ireo hetsika ara-politika nataony nandritra ny fitondran'ny fotsy hoditra vitsy an'isa mialohan'ny naha-filoha azy ity olom-panjakàna mamy hoditra sy nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ity, izay antsoina matetika hoe Madiba.
Hatramin'ny nivoahan'ny vaovao momba ny fahafatesany, nankalaza ny fiainana sy ny vanim-potoana nisian'ity lehilahy ity, izay antsoin'ny sasany hoe ilay fanomezan'i Afrika tsara indrindra ho an'ny olombelona, ry zareo Nizeriana. Araka ny fijerin'izao tontolo izao an'i Afrika, tsy fotoana fisaonana ny fahalasanan'ilay olon-kendry, fa fotoana fisainana sy fankafizana ny lova mendrika. Tsy nitsahatra ny fanomezam-boninahitra azy tao amin'ny media sosialy nizeriana nanomboka tamin'ny filazana ny fahafatesany.
Nelson Rolihlahla no filoha voafidy ara-demokratika voalohany tany Afrika Atsimo. Sary nalain'ny South Africa The Good News , nampiasàna ny Creative Commons (CC BY 2.0).
Oluwatosin Olaseinde, mpikirakira ny ara-bola sy mpanamarim-bola iray, dia nilaza toa izao:
Tsy ho andro fisaonana anio, fa tokony ho andro fankalazana. Nandresy teo amin'ny fiainana i Mandela, ampy ny taonany, Mandry Amim-piadanana Izy
— Oluwatosin Olaseinde (@PrincessTosin87)
— Oluwatosin Olaseinde (@PrincessTosin87) 6 Desambra 2013
Nanoratra i Oby Ezekwesili, filoha lefitra fahiny tao amin'ny sampana Afrikana ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena, hoe:
Mbola ho “lavitra ny lalana” ho an'ireo filoha afrikana maro mba “handova” ireo SANDAN'NY HAREN-TSAIN'i #Madiba. Ho deraina ireo izay sahy hanao ny dingana voalohany!
- Oby Ezekwesili (@ obyezeks) 6 Desambra 2013
Nankalaza an'i Mandela ny mpampiasa Twitter @ba55ey:
Loharanonà aingam-panahy ho an'ireo olona manerana ny firenena eran'izao tontolo izao #Madiba
- BMC! (@ ba55ey) 6 Desambra 2013
Loharanonà aingam-panahy ho an'ireo olona manerana ny firenena eran'izao tontolo izao i #Madiba
Nizara horonantsary misy ny “Kabary ho an'ny Fandriampahalemana” nataon'i Madiba ny Mpanao Gazety Abang Mercy-Asu:
HORONANTSARY: Kabary ho an'ny Fandriampahalemana nataon'i Nelson Mandela http://t.co/tYblZ45j3y
— Abang Mercy-Asu (@AbangMercy) 6 Desambra 2013
Nizara lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy ny Mpanoratra sy mpanao bilaogy Nze Sylva Ifedigbo:
Fotoana hizarana an'ity (Raki-tahiry) ity izao»» FAMPIANARANA AVY AMIN'ILAY LEHILAHY MAMY HODITR'IZAO TONTOLO IZAO #NelsonMandela | Nzesylva's Corner http://t.co/4AYcPPp7uU
— Sylva Nze Ifedigbo (@nzesylva) 6 Desambra 2013
Niantso ny fandinihan-tena manokana ny Mpampiasa @KwamiAdadevoh:
Efa mitovy taona amin'ny #Madiba fony izy nigadra aho izao. Mety ho zakako ve, ara-batana sy ara-tsaina, ny hizaka izany 27 taona dia mbola hanohy hitarika izao tontolo izao?
-# Madiba46664 (@ KwamiAdadevoh) 6 Desambra 2013
Mpampiasa @WilDeji, mpibaiko alika, dia niresaka momba ny daty nanafahana an'i Madiba tany amponja:
“Navoakan-dry zareo i Mandela” - tadidinareo ve ny fotoana izay nandrenesanareo io fanambarana io? Inona no nataonareo…?
— 46664 || Just Pets (@WilDeji) 6 Desambra 2013
“Navoakan-dry zareo i Mandela” – tadidinareo ve ny fotoana izay nandrenesanareo io fanambaràna io? Inona no nataonareo…?
Nanamafy i Bola Ahmed Tinubu, lehilahy mpanao politika sy mpikambana lehibe ao amin'ny antoko mpanohitra Nizeriana, fa:
Mankalaza an'i Mandela ireo mpitondra, saingy tsy ananan-dry zareo ny fifehezan-tenany sy ny tanjany ara-moraly. Manohitra ny vahoakany izy ireo sady manaratsy an'i Afrika
— Bola Ahmed Tinubu (@AsiwajuTinubu) 6 Desambra 2013
Niantso ny “Maha-Mandela” i Nnayelugo:
Tsy maintsy hanomboka amin'ny fiverenana an'asa amin'ny fotoana maha-mety azy aloha ireo Nizeriana (raha hizotra ho amn'ny “Maha-Mandela”).
- Nnayelugo (@ eloka51) 6 Desambra 2013
Tsy maintsy hanomboka amin'ny fiverenana an'asa amin'ny fotoana maha-mety azy aloha ireo Nizeriana (raha hizotra ho amin'ny “Maha-Mandela”).
Somary naneso ny bitsika nalefan'ilay mpitsikera haisoratra, Lord of the Gourds:
Tokony hosaziana hamaky vato any Kiriri [Fonja voaaro mafy any Lagos, Nizeria] mandritra ny 14 taona ireo Nizeriana “mpitarika” tratra manao ranomaso manetsik'eloka ho an'i Mandela.
@AsiwajuTinubu— Lord of the Gourds (@ikhide) 6 Desambra 2013
Tokony hosaziana hamaky vato any Kiriri [Fonja voaaro mafy any Lagos, Nizeria] mandritra ny 14 taona ireo Nizeriana “mpitarika” tratra manao ranomaso manetsik'heloka ho an'i Mandela.
Tsy niantra ireo mpitondra afrikana i @nnamdiarea:
Ny zavatra ratsy indrindra mikasika ny fahafatesan'i Mandela dia ireo laha-teny lavabe mahasorena ataon'ireo mpitondra afrikana izay te-hidokadoka azy nefa tsy hanaraka ny diany akory.
— Geek. (@nnamdiarea) 6 Desambra 2013
Ny zavatra ratsy indrindra mikasika ny fahafatesan'i Mandela dia ireo lahateny lavabe mahasorena ataon'ireo mpitondra afrikana izay te-hidokadoka azy nefa tsy hanaraka ny diany akory.
Jason Kayode, mpanadihady ara-tsosialy iray dia maneho fa tsy dia momba ny maha-mpitondra azy loatra izy ity fa ny maha-olo-mendrika azy:
Fanontaniana: Filoha nizeriana iza no ho toa an'i # Madiba. Valiny: Olom-pirenena nizeriana iza no toa an'i #Madiba
— Jason Kayode (@KayodeJason) 6 Desambra 2013
RamblersINC, mpanao bilaogy sy mpanabe, mamintina ny haren'i Mandiba:
Ny lesona eto dia hoe tsara kokoa noho ny harena, ny voninahitra na ny fahefana ny laza tsara. Tsy jerena amin'ny fitobahan'ny harena ny lanjan'ny fiainan'ny olona iray.
— RamblersINC. (@tee_hidee) 6 Desambra 2013
Nanoratra i Mojisola Sodeinde hoe:
Ankehitriny, kilasiana ho ambonin'ireo mpiandry fonja izy, ambonin'ireo mpitondra rehetra eran'izao tontolo izao, ambonin'ny fiandrianana, anaty fahafatesana, lehibe noho ny fiainana izy ~ Nelson Mandela
— Mojisola Sodeinde (@mojisodeinde) 6 Desambra 2013
Molara Bois (@ molarawood), mpanoratra, mpanao gazety ary tonian'ny famoahan-dahatsoratra iray, namehy ireo fihetseham-pon'ireo Nizeriana ao anaty tweet mirindra:
Lasa Mandela. Mody ny masoandro. Mianjera ny elefantra. Tsy maha-loa-bava. Veloma, Madiba. Soava dia
— Molara Wood (@molarawood) 5 Desambra 2013
Handihy amin'ny figadon'ito hira ito i Madiba, nosoratan'ny mpanakanto nizeriana iray, Tosin Gbogi, raha manakaiky ny «varavaran'ny lanitra» izy:
Nelson, mirehitra ny jiro anatin'ny haizin'ny alina
Mavesatra ny mandrakizay miaraka amin'ireo fahatsiarovana
Miseho amin'ny endriny farany ny teny.
Mahatsiaro ireo fetra ara-dalàn'ny tolona i Soweto
Tamin'ny alina tahaka io, Nelson, alina iray tahaka io raha
Nirehitra tamin'izao tontolo izao ny jiro, nanazava
Ireo fahatsiarovana: ny famonoana tena maranitra
Ary mahatsiravina: Botha sahisahy nefa tsy misy saina
Ny alina, am-bavany, dia miantso ireo razam-beny amin'ny fankahalàny ny
Mangiran-dratsy izay mitondra ny nosy Robben eo am-pofoany.
Soava dia, an-dàlana ho any amin'ny Tanànan'ny Fandriampahalemana i Nelson
Omena azy anie ny fiadanana mandrakizay, oh
Ry Anjely Biko sy Brutus, hafaingano ny làlany ho any amin'ny varavaran'ny lanitra